ထိုကောင်လေးနှင့် ၁၀မိနစ်ခန့်| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထိုကောင်လေးနှင့် ၁၀မိနစ်ခန့် 
ထိုကောင်လေးနှင့် ၁၀မိနစ်ခန့် 
Posted by moonpoem on Feb 13, 2013 in Creative Writing, Local Guides, My Dear Diary, Travel | 21 comments
နတ်မိမယ် နေ့ တိုင်းအိပ်ပြီး တစ်လငွေ၎သောင်းရမှ
အစ်မ ဧည့်သည်တွေက ဘာလူမျိုးတွေလဲ။ ကျွန်မ လှဲနေသည်ဆိုသော်လည်း အိပ်ပျော်နေခြင်း မဟုတ်သည်ကို
သတိထားမိဟန်တူသောကြောင့် ထိုကောင်လေးက ကျွန်မကို မေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူကတော့ ထိုင်လျက်။
သူက ထိုင်ရင်းဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ကာ မေးနေသည်ကို ကျွန်မက အိပ်ရင်းနဲ့ တော့ မဖြေချင်ပါ။ လူးလဲထပြီး
သြော်..ဂျပန်တွေလေ မောင်လေးဟု ဖြေလိုက်သည်။
အံ့သြစရာနော် အစ်မ ကျွန်တော်ဖြင့် ဒီဘုရားကို အဖေနဲ့ လိုက်လာတာဖြင့် ဟိုးငယ်ငယ်ကလေးတည်းက။
ဒီလို ဘုရားစောင်းတန်းမှာ အိပ်ကြတာ မြန်မာလူမျိုးပဲတွေ့ ဘူးသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် ဘုရားပတ်ပြီး
ပြန်တာများပါတယ်။ အစ်မဧည့်သည်ဂျပန်တွေကျမှပဲ ဘုရားစောင်းတန်းလာအိပ်ကြတယ်နော်။ နေပူထဲ
လျှောက်သွားရတာ ပင်ပန်းလို့ လားအစ်မ။
ဟုတ်မှာပါလေ သန်လျင်က ဒီလောက်နေပူတာ ပင်ပန်းမှာပေါ့။ ကျွန်တော်က ဒီနှစ် ၁၀တန်းဖြေမှာဗျ။
အိမ်ကတော့ စာကျက်ဖို့ ပြောတာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ စာကျက်ရမှာထက် ဘုရားမှာ လာနေရတာ
ပိုကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဒီလ၁၈ရက်နေ့ ဆို ဘုရားပွဲကစပြီ။ အိမ်ကညဘက်ထွက်လို့ မရတော့ နေ့ ဘက်
မိုးကြိုးငှက်ငယ်ကိုပဲ လာကြည့်ရမှာဗျ။ မိုးကြိုးငှက်ငယ်ဆိုတာ အခြောက်မတွေနော် အစ်မ။
အခြောက်ဆိုလို့ အထင်မသေးနဲ့ ဟန်ဇာတို့ ၊ဖိုးချစ်တို့ က ညဘက်ပဲ ကနိုင်တာ သူက နေ့ရောညရော
ဆွဲတာရယ်ဗျ။ အခြောက်တွေ၂ချီလုံးကတာ လူကြိုက်များလို့ ဒီနှစ်က နတ်မိမယ်ဆိုတဲ့ တစ်ဖွဲ့ တောင် အသစ်တိုးလာသဗျ။
အသစ်တွေကို ထိုင်ကြည့်ဖို့ ထက် ကျွန်တော်ကတော့ မိုးကြိုးကိုပဲ စောင့်ကြည့်မယ်ဗျာ။
အစ်မတို့ အလုပ်လုပ်ရတာ နေ့ ပူထဲထွက် သူတို့ နဲ့ လျှောက်လည်နဲ့ အတော်ပင်ပန်းမှာပဲနော်။
ကျွန်တော့်အဖေလို မပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်ရှာလုပ်ပါလား။ တစ်လကို ၄သောင်း ဒီနယ်ကလူကြီးတွေက
အလုပ်ပေးထားတာ။ ရာထူးလည်းရှိသဗျ။ ကျိုက်ခေါက်ဘုရား ဂေါပက အသင်းဝင်လူကြီးပေါ့။
မနက်အိပ်ရာထ မုန့် စားပြီး ဘုရားပေါ်တက်လာ ဒီရောက်တော့ လူကြီးတွေစုပြီး ဟိုဟိုဒီဒီပြောကြ
နေ့ခင်းတရေးတမောအိပ် ပြီးရင် ပြန်ဒါပဲ။ ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလိုက်သလဲ။ အစ်မလုပ်ချင်ပြောနော်
ကျွန်တော့်အဖေကို ပြောပေးမယ်။ခုနက အစ်မအိပ်နေသလို နေ့ တိုင်းအိပ်ပြီး တစ်လငွေ၎သောင်းရမှာ။
ကျွန်မတစ်နေကုန်ဧည့်သည်တွေကို ထိုင်ပြီး စကားပြောရှင်းပြရင်းဂိုက်လိုက်ခဲ့တာ အခုတော့ အမောလည်းပြေ၊ ရယ်လည်းရယ်ရသော ၁၅နှစ်သားကောင်လေးရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်စီးရီးကို နားထောင်နေမိဧ။် ။ ကိုယ်နှင့် မသိမကျွမ်းပါပဲ အစ်မကြီးတစ်ယောက်ပမာပြောဆိုဆက်ဆံနေသော ကောင်လေးကိုလည်း ခင်မင်မိပါဧ။်
ခဏနေတော့ ဧည့်သည်တွေနိုးလာသဖြင့် ကောင်လေးကို နှုတ်ဆက်ကာ ပြန်ခဲ့ဧ။် ။ သူ့ နာမည်က
နာမည်ကျော်အဆိုတော် နနစိုင်းဆိုပဲ။ ကောင်လေးရေ ၁၀တန်းအောင်ပါစေ။ မင်းအစ်မကိုဖြစ်စေချင်တဲ့
ဂေါပကအလုပ်ထက် ပင်ပန်းပေမယ့် ၀ါသနာကြီးလှတဲ့ဂိုက်ဘ၀မှာပဲ အစ်မပျော်နေပါရစေ။
သူ့ ဘက် ကိုယ့် ဘက်
သူ့ အကြိုက် ကိုယ့် အကြိုက်
အင်းးးးး ဘုရားထက်ကြီးတဲ့  ဘုရားလူကြီးကတော့ ……..
ကိုဆာမိရေ ပထမဆုံးကွန်မန့် အတွက် ကျေးဇူးပါ။ မန်းဂေဇက်က ရွာသူရွာသားတွေစုပြီး ကိုရင်ဆာမိကို လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်သွင်းမယ်ဗျာ။ ဂေါပက လုပ်ဖို့ :P
( မနက်အိပ်ရာထ မုန့် စားပြီး ဘုရားပေါ်တက်လာ ဒီရောက်တော့ လူကြီးတွေစုပြီး ဟိုဟိုဒီဒီပြောကြ
နေ့ခင်းတရေးတမောအိပ် ပြီးရင် ပြန်ဒါပဲ။ ဘယ်လောက်အဆင်ပြေလိုက်သလဲ။ )
ဒီတစ်ခေါက် မီတင်မှာ ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ ဖိုက်ရဦးမယ်ဆိုရင် အဲဒီပြောင်းတာကောင်းမယ်ထင်တယ် ၊
လူတွေက ဒီလိုပါပဲ ၊ ကိုယ့်အနီးအနားက အကြောင်းရာတွေနဲ့ပဲ စခန်းသွားနေရတဲ့အခါ
ဒါကိုပဲ ဟုတ်ပြီထင်မပေါ့ ၊ သူ့အရွယ်ကလည်း ပါပါသေးတယ် ၊
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးလို ရေးသွားပေမယ့် နောက်ကွယ်မှာ တွေးစရာပေါင်းက မြောက်မြားစွာ
ဟုတ်ပ ကိုမျိုးသန့် ရေ။ ရုံးလုပ်ငန်းမှာ သည်းခံရတာတွေများလွန်းလို့ စိတ်ရှူပ်ရတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ရံ အလုပ်မလုပ်ချင်တော့တဲ့စိတ်၊ ရွာပြန်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုမရှိတဲ့ အလုပ်၊စိတ်ဖိစီးမှုမရှိတဲ့ဘ၀ကို လိုချင်မိတယ်။အင်း….ကိုမျိုးသန့်ဂေါပကလုပ်ချင်ပြောလေ ကျွန်မအဲဒီကောင်လေးကို ရှာပြီး ပြောပေးမယ် ဟိဟိ။
ဒါပေမယ့် လှည်းတန်းကနေ ကျိုက်ခေါက်ကို အလုပ်ဆင်းရမယ်ဆိုရင်တော့
လစာက ဘတ်စ်ကားခနဲ့ ကုန်မယ်ထင်တယ်နော်
ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာ ဆိုတဲ့စကားရပ်ကလေး သတိရမိတယ်။
( မင်းအစ်မကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ ဂေါပကအလုပ်ထက် ပင်ပန်းပေမယ့် ၀ါသနာကြီးလှတဲ့ ဂိုက်ဘ၀မှာပဲ အစ်မပျော်နေပါရစေ။ ) လကဗျာလည်း ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာပေါ့။
( အစ်မလုပ်ချင်ပြောနော် ကျွန်တော့်အဖေကို ပြောပေးမယ်။ခုနက အစ်မအိပ်နေသလို နေ့ တိုင်းအိပ်ပြီး တစ်လငွေ၎သောင်းရမှာ။ အစ်မအခုလုပ်နေရသလို မပင်ပန်းဘူး။ ) ဒါလည်း ကလေးရဲ့ ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာဘဲ။
တကယ်တော့ မိမိ ကျင်လည်ရာဝန်းကျင်နဲ့ အလုပ်သည် မိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာ ဖြစ်လို့ လိမ္မာစွာ ရပ်တည် လုပ်နေကြရတာလဲ ဘ၀အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါဘဲလားလို့ ………။
လူတွေကတော့ ကိုယ်လည်ပတ်နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်ကြတာအမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း
ကောင်လေးက သူ့ အတွေးနဲ့ သူပြောတာဆိုပေမယ့် တနည်းတဖုံတော့လည်း မှန်နေပေသားလို့ ကိုခင်ခထင်သလို ကျွန်မလည်း တွေးမိပါတယ်။
ဘုရားကြီးမှ ဂေါပကအဖွဲ့ အား ပေးရန်ကျန်ငွေ.. ဆိုတာလေးသတိရမိတယ်…
ဘုရားကြီး ထီးတင်ဖို့ ဂေါပကအဖွဲ့က အလှုငွေကောက်.. ပြီးတော့ ဂေါပက အသုံးစရိတ်၊ လော်ငှားခ၊ မဏပ်ဆောက်ခ…. နှုတ်လိုက်တော့… ဘုရားကြီး အကြွေးတင်သွားတာပေါ့
တောက်…. ဒီခေတ်ခလေးတွေများ ထက်မြတ်ချက်…
သင်းတို့လိုမပါးနပ်လို့ ခုလို ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာစားရတာ…
ဦးကျောက်နဲ့ ဂေါပက အလုပ်နဲ့ အံကိုက်ပဲ…
မိုက်ကလေးခဲပြီး ပွါးချင်ရာပွါး… ရှယ်ပဲ…
ကိုင်း…. ဂဇက်ရွာဦးမှာ ဘုရားတည်ဗျာ…
ဦးကျောက် ဂေါပကလုပ်မယ်… ဟီ ဟိ.. နိပ်ဟ…
” မိုက်ကလေး ခဲပြီး ပွားချင်ရာပွား… ရှယ်ပဲ ”
ယုံပါတယ် ဦးကျောက် ရယ် ။ ယုံပါတယ် ။
အတုမြင် အတတ်သင် တယ်ဆိုသလို ကလေးလေးက လူကြီးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အတုယူပြီး နောင်တစ်ချိန် လူကြီးဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုများ စဉ်းစားတွေးခေါ်လိမ့်မလဲလို့ စိတ်ပူမိတယ်။ :buu:
၁၅ နှစ်သား ထိုကောင်လေးနဲ့ …
ဆယ်မိနစ် မို့နော် …. ဟဲဟဲ …
တစ်နာရီလောက်သာ ဆိုရင် … ဟဲဟဲ ..
အော် .. ဒီထက် ပိုပြီး ရီစရာ … အကြောင်းအရာ တွေ …
ပိုရေးနိုင်မှာပါလို့ … ပြောတာပါ … ဟဲဟဲ …
တစ်ကယ်တမ်း ဂေါပကအလုပ်ကလည်း လုပ်ချင်တဲ့သူတိုင်း
လုပ်လို့မရဘူးဗျ။ လမ်းကြောင်းရှိတယ်။ အလွတ်ဝင်လို့မရဘူးနော်။
၁၅နှစ်မောင် ဆိုပြီး သီချင်းဖွဲ့ ရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့ 
ဂေါပက ဂေါပကနဲ့ လွယ်တယ်များ ထင်နေလား
အရည်အချင်းတွေ အတော်ပြည့်ပြီးတော့ မျက်နှာလဲ ပြောင်နိုင်မှ ဂေါပကဖြစ်တာ သိလား
(ဂေါပက ဂေါပကနဲ့ လွယ်တယ်များ ထင်နေလား
အရည်အချင်းတွေ အတော်ပြည့်ပြီးတော့ မျက်နှာလဲ ပြောင်နိုင်မှ ဂေါပကဖြစ်တာ သိလား) အဲ့ဒါဆို အူးမာဃဆို ပြိုင်ဘက်မရှိ ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမရှိပဲ.. ထိုင်စားနေသူတွေစာရင်းထဲ.. တမျိုးတိုးလို့ရသွားသမို့.. ကျေးကျေး..
ဘော်ဘော်တွေ စုံပြီ ဆိုရင် မိုက်ခဲမယ်။
ဒီကလေး ဂလောက် ညွှန်းတဲ့ အလုပ် ကောင်းကြောင်း ကိုသိရတော့ အလုပ်ပြောင်းရရင်ကောင်းမလားပဲ။
အဲ့ အလုပ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ ကဗျာလေးရယ်။
နေ့တိုင်း အိပ်နေရင်း ပိုက်ဆံရ၊
ကောင်လေးက ကလေးအတွေးနဲ့ပြောတာမို့လို့ လွယ်သလိုထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ မလွယ်ပါဘူး … ကျွန်မသိသလောက်တော့ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်တွေမှာ ၂ မျိုးရှိပါတယ် … ပိုက်ဆံချမ်းသာပြီး ရာထူးဂုဏ်ထူးကြီးတဲ့သူတွေက အဓိကနေရာကပါဝင်ပေမယ့် နေ့စဉ်ရုံးလုပ်ငန်းလိုမျိုးလုပ်ဖို့ အချိန်မရကြဘူး … ရုံးကိစ္စတွေအတွက် ၀န်ထမ်းခန့်ထားကြရတယ် … ၀န်ထမ်းခန့်တဲ့နေရာမှာလဲ အထူးသဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းကနေ ပင်စင်ယူထားတဲ့ ရုံးအုပ်ကြီးပင်စင်လိုလူမျိုး (အကျင့်စာရိတ္တကောင်း) ကို လစာအနဲငယ်နဲ့ ခန့်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း ဘုရားကိုသွားပြီး ရုံးတက်ရတာနဲ့တင် လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူး ..
ဘုရားဝေယျာဝစ္စ တာဝန်ယူထားတာ ငွေလေးသောင်း အဆရာထောင်မက တန်တာတာပေါ့။ လခထက် အသုံးစရိတ်လို့ မြင်ရင်ပိုသင့်တော်မယ်ထင်တယ်။ မသူတော်တွေလည်း အများဂျီးရှိမှာပါ သို့သော် အမြတမ်း ဂေါပကတာဝန်ယူထားပြီး ပုံမှန် ဝေယျာဝစ္စ အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ပေးနေရင် သာဓုခေါ်ရပါမယ်။
သြော် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ့် ကယ်ဆမ်ကွေကာကိုသောက်ကြသည် ပေါ့။